01-Adịghị agbagwoju gị anya site aha nke oghere Golden Jungle? I nwere ezi ihe mere ha ịbụ. Nke a cha cha free spins dịghị nkwụnye ego chọrọ oghere egwuregwu na-eweta gị niile myriad iche nke gold akụ na i nwere ike mgbe na-eche nke.
Chọọ ndị na-esi anwụde ndị ọlaedo ọnụ ụzọ ámá, ụkpụrụ nile, ọlaedo n'ocheeze, artefacts, golds yiri mgbaaka agbakwunyere na nkume di oké ọnu na ihe ọ bụla na ihe niile nke gold. Nke a cha cha free spins dịghị nkwụnye ego chọrọ oghere ka na India akụkọ ihe mere eme isiokwu. Indian akụkọ ihe mere eme na-mara site na nnukwu abaghị ọgaranya alaeze ukwu nke Indian eze turu ọnụ nke richness ọ bụla uche nke okwu.
Banyere Mmepụta nke Golden Jungle
IGT anọchi International Gaming Technology, ihe American ụlọ ọrụ bụ onye nwere ọtụtụ ihe magburu onwe Ebe e si nweta aha ya na aha oghere egwuregwu ebe ọ bụ na 2006. Ya graphic artists bụ a mma-kwara ìgwè ndị ọkachamara ndị mgbe niile ịhụ na na-eke kacha mma mma ohere mpere na elu-ọgwụgwụ animations na ọkaibe technology.
Ọhịa na chụsasịa ha ókè ruuru pụtara ime ka nnukwu Enwee Mmeri nri n'ime gị n'akpa uwe. Ya mere, gịnị bụ usoro / Nchikota na akara na ị ga image-ahụkwa ụzọ?
Ihe mbụ niile mbụ, Golden Jungle ohere mpere cha cha free spins dịghị nkwụnye ego chọrọ egwuregwu nwere 50 paylines kere n'elu 5 -esi anwụde. The ịkụ nzọ-amalite site 50p a atụ ogho ka £ 1,500.
Symbols chọọ na-esi anwụde ọla nkume, artefacts dị ka mma agha, headpieces, mara mma ọlaedo chọọ mma igbe, elephant awụ, na ọla-edo uzọ-ama. N'elu bonus akara bụ a 2 akara bịara ikiri tiger image nke nwere ike iji na gị mụbaa eto site 40 mgbe ahụrụ 5 gafee esi anwụde.
The elephant awụ bụ anụ mgbe ọlaedo temple ụzọ ámá bụ ndị ikposa akara.
N'etiti atụmatụ nke cha cha free spins dịghị nkwụnye ego chọrọ game, na nyochaa agaghị ezu ezu na-enweghị Ncheta nke The Wild tọrọ na-, 4 ejije feature. Ebe a, mkpa ka ị na-anakọta 4 Arụsị a kpụrụ akpụ ọhịa akara ime ọhịa esi anwụde ekpochi na gị na ihuenyo. The ekpochi ukwu mụ maka ọzọ 4 spins ike dị egwu na-emeri ihe n'ịgwa gị. Mgbe ahụ, e-abịa na Free spins daashi feature nke triggered site na ikposa akara dị ka ọtụtụ oghere cha cha free spins dịghị nkwụnye ego chọrọ egwuregwu. na-n'etiti 3-5 chụsasịa-eme ka ị na-ahọrọ site na nhọrọ:
3 chụsasịa: 15 free spins na ukwu 3 na-a kpọchiri
6 free spins na-esi anwụde 2 na 4 na-ekpochi
2 free spins na-esi anwụde 1, 3 na 5 na-ekpochi
4 chụsasịa: 30 free spins na ukwu 3 na-a kpọchiri
12 free spins na-esi anwụde 2 na 4 na-ekpochi
4 free spins na-esi anwụde 1, 3 na 5 na-ekpochi
5 chụsasịa: 75 free spins na ukwu 3 na-a kpọchiri
30 free spins na-esi anwụde 2 na 4 na-ekpochi
12 free spins na-esi anwụde 1, 3 na 5 na-ekpochi
Ya mere,, dị họrọ ihe ọ bụla Nchikota suut gị ihe kasị mma na ị bụ ọma na-aga n'okporo ụzọ nke akụ!
A iri na iri oghere na ala na-ajụ ndịiche adabara niile nso nke Player 'nhọrọ, IGT ugboro ọzọ gbatara a hit na Golden Jungle ohere mpere cha cha free spins dịghị nkwụnye ego chọrọ.